भारतबाट कति भित्रिए प्रदेश २ मा ? | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » भारतबाट कति भित्रिए प्रदेश २ मा ?
भारतबाट कति भित्रिए प्रदेश २ मा ?
काठमाडौं जेठ १० गते । प्रदेश २ कोरोना भाइरसको हट स्पट बन्दैछ । नेपाल भारत सीमा नजिक रहेको कारण कोरोनाको संक्रमण दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ ।
भारतमा रेल्वे संचालन भएपछि सीमा नाकामा हजारौं नेपाली आइपुगेका छन् । औपचारिक अनौपचारिक रुपमा दैनिक सैयौंको सँख्यामा नेपालीहरु भित्रि रहेका छन् । लामो समय सीमामा नागरिक अलपत्र पर्दा अवैध रुपमा प्रवेश गर्ने र थप संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाएर सरकारले जेठ ४ गतेदेखि नागरिकलाई प्रवेश दिन सुरु गरेको हो ।
पछिल्लो ६ दिनको अवधिमा प्रदेश २ को विभिन्न जिल्लाको मुख्य सीमा नाका हुँदै ४ हजार ६६४ नेपाली नेपाल भित्रिएका छन् । ती प्रायः मधेशकै हुन् । उनीहरुलाई हाल विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
भारतबाट आउने व्यक्तिहरुलाई सीमानाकामा स्थापना गरिएको हेल्थ डेस्कमा स्वास्थ्य चेकजाँच गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मा लगाएर क्वारेन्टाइनमा दुई सातासम्म राख्ने गरी पठाइने गरिएको छ ।
महोत्तरीको मुख्य नाका मलिवाडाबाट ५६७, सिरहाको माडर नाकाबाट ७३४, सप्तरी स्थित नाकाबाट ७५४, सर्लाही स्थित नाकाबाट ६०१, रौतहट स्थित नाकाबाट ६९७, बारा स्थित नाकाबाट २३९ र पर्सा स्थित नाकाबाट ४६५ जना व्यक्तिहरु नेपाल आइसकेको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, सप्तरी नाकाबाट ९५, सिरहा नाकाबाट ६६, रौतहट नाकाबाट २ सय १२, बारा नाकाबाट ६७ र पर्सा नाकाबाट ४१ सय ८९ जना भारतीयहरु समेत भारत तर्फ गएको उहाँले बताउनुभयो ।